नेपाली किसानकाे हातमा लालपु’र्जा छ, तर जमिन भारतकाे क’ब्जामा सिमनाको पि’डा…हेर्नुहोस् । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
नेपाली किसानकाे हातमा लालपु’र्जा छ, तर जमिन भारतकाे क’ब्जामा सिमनाको पि’डा…हेर्नुहोस् ।
कञ्चनपुर, ५ असार । कञ्चनपुरको बेलौरी नग’रपालिका- १ फटि’याका क’र्ण बहादुर सुनार १५ कट्टा जमिनका मालिक हुन् । तर, उनीसँग जमिनको लालपु’र्जा मात्रै छ, जमिन छैन । लालपु’र्जा भएको जमिन कहाँ गयो भनेर कतै आ\_श्चर्यमा नपर्नु होला !
बेलौरी नग’रपालिका- १ फ’टियाका क’र्णबहादुर सुनारले २० व’र्षदेखि आफ्नो जमिन उप’भोग गर्न पाएका छैनन । सुनारको जमिन नेपाल–भारत सी’माको पि’लर नम्बर २००-२०१ को बीचमा प’र्दछ । सो जमिन भारतीय प’क्षले आफ्नो दा’बी गरेपछि उनी जमि’नविहीन बनेका हुन् ।
विस २०२८ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको सुनारको जमि’नको २०३५ सालमा कि’त्ताका’ट गरी नेपाल सरकारले २०३६ सालतिर जग्गा ध’नी लालपू’र्जा दिएको थियो । सुनारको जमिन २०५७ सालदेखि भारतीय प’क्षले क’ब्जा गरेपछि उनले जमिन उप’भोग गर्न पाएका छैनन् ।
पी|डित सुनार भन्छन्, ‘भारतीय प’क्षले बेला-बेलामा ध’म्काउने, दु-र्व्य’वहार गर्ने गर्दछन् । के गर्ने काग’जमा मात्रै जमिन छ । २०० र २०१ को दू’रीमा पर्ने उक्त १५ क’ट्टा जमिन भारतीय प’क्षले खे’ती लगाउन न’दिएर २० वर्षदेखि बाँ’झै छ ।’
वर्षौंदेखि उपभो’ग गर्दै आएको ज’मिन आफूले उ’पभोग गर्न नपाएको २० वर्ष भै’सकेकाे सुनाउँदै उनले भने, ‘फि’र्ताका लागि कहीँकतैबाट समेत प’हल भएको छैन ।’ जमिन उ’पभोग गराईदिने प’हल कसैले नगरको उनको दुखे’सो छ ।
Previous MCC पढेका मान्छे त्यति भेटिनँ, MCC सम्झौता खोजेर पढे हुन्छ भन्नुहुन्छ -प्रधानमन्त्री ओली…हेर्नुहोस!
Next काँक’डभिट्टामा भारतले रो’क्यो कृ’षि उ’त्पादन लि’एर गएका २५ ट्र’क…हेर्नुहोस् ।